ကုမ္ပဏီသတင်းများထုတ်လုပ်သူများ | တရုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းများစက်ရုံ & ပေးသွင်း
စီးပွားရေး Laptop အမှု
အပန်းဖြေ & ဖက်ရှင်
ကျောင်း & အငယ်တန်း
အပြင်ဘက် & တောင်တန်း
Canton Fair အွန်လိုင်းပြပွဲကျောင်းသို့ပြန်သွားပါ။ Magic Sequin, မှော်ဘဝ
20-11-17 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Canton Fair အွန်လိုင်းပြပွဲ, ငါတို့ထိုကဲ့သို့သောအထူးကာလမှာတွေ့ဆုံရန်နိုင်ဘူး။ ဤဗွီဒီယိုတွင်၊ ကလေးများအားပြန်သွားရန်ကျောင်းသို့ပြန်သွားသည့် SEQUINS အိတ်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာပြောပြသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုး၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ကန့်သတ်ချက်များစသည့် SEQUIN ပစ္စည်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အချို့မျှဝေလိုပါသည်။
ရောင်စုံ Jelly အိတ်နှင့် Rainbow PVC လက်ကိုင်အိတ်
20-11-07 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်ပါ၊ ဘဝကိုချစ်ပါ။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသယ်ဆောင်ရန်ခရီးသွားအလင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုပ်ပိုးမှုကိုမည်သို့စီစဉ်မည်နည်း။ လိုအပ်သောသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာခရီးသွားထုပ်ပိုးမှုကုဗကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ သင်၌စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
Twinkling ကြယ်ပွင့် 25 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်
20-10-22 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် Twinkling Star ၂၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာထောက်ပံ့ပေးနေသောဖောက်သည်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဤဗီဒီယိုတွင်လူတိုင်းအတွက် SUPER အထူးကမ်းလှမ်းချက်ကိုကြေငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့မစောင့်နိုင်ပါ။ !! ပိုမိုသိရှိလိုပါက info@tkstar.com သို့အခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
2020 Canton Fair Online Show_Tinkling Star
20-10-21 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Twinkling Star_Magical Mummy ကျောပိုးအိတ်တစ်အိပ်ရာသို့ပြောင်းလဲ!
မင်းကကလေးငယ်တွေငိုပြီးအော်ဟစ်နေတာကိုတွေ့ဖူးလား။ အပြင်မှာရှိနေရင်လက်ကိုလွှတ်ပေးမယ့်အိပ်ရာလိုချင်သလား။ အပြင်မှာရှိနေရင်သင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုရွေးချင်ပါသလား။ ဒီဗီဒီယိုမှာငါတို့မှော်မိခင်ရဲ့ကျောပိုးအိတ်ကိုဘယ်လိုပြောပြမလဲ။
Twinkling Star_Dupont ကျောပိုးအိတ်နှင့်ခေတ်မှီစီးပွားရေးကျောပိုးအိတ်
“ စက္ကူ” မှပြုလုပ်သောအိတ်တစ်ခုကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။ တကယ်တော့၊ Dupont Paper လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးရှိတယ်၊ tyvek fabric လို့လည်းခေါ်တယ်။ ဒါဟာစက္ကူနဲ့တူပေမယ့်ရေစိုခံနှင့် Eco-friendly! ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ၊ Dupont material.Let မှပြုလုပ်သောကျောပိုးအိတ်ကိုမင်းနှင့်မျှဝေရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ...
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအားလပ်ရက်မှာခရီးသွားခြင်းကိုရွေးချယ်ချင်ပါတယ် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသယ်ဆောင်နိုင်သည့်ခရီးသွားအလင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ pack pack ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာကအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ၊ ကျယ်ဝန်းတဲ့၊ ပေါ့ပါးပြီးဈေးသက်သာတဲ့အိမ်သာအိတ်အချို့ကိုပြသထားလိမ့်မယ်။
လိပ်စာ 238 # Zhitai လမ်း, Qingmeng စီးပွားရေးဇုန် & နည်းပညာစက်မှုဇုန်ဧရိယာ, Quanzhou, ဖူ, တရုတ်
© Copyright - 2010-2020: အားလုံးအခွင့်အရေး။ ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
Recycle Bag, ပြန်လည်အသုံးပြုအိတ်အထည်အလိပ်, Recycle foldable စျေးဝယ်အိတ်, အကြီးစား Recycle Bag, မဟုတ်သောယက်အိတ် , Eco-Friendly Bag ,